Khayre oo si deg deg ah ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Khayre oo si deg deg ah ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho
Khayre oo si deg deg ah ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho
Xasan Cali Khayre, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa si deg deg gelinkii dambe ee maanta ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, ka dib markii Xildhibaanada Golaha Shacabka ay maanta kalsoonida kala laabteen xukuumadiisa.
Ra’iisal Wasaaraha oo tan iyo 14-kii bishan hawlo shaqo u joogay Magaalada Dhuusamareeb ayaa galabta diyaarad gaar ahi ka soo raacay Garoonka Ugaas Nuur, iyadoona ka soo dejisay Garoonka Aadan Cadde.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa waxaa Garoonka Aadan Cadde ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah Golihiisa Wasiirada iyo Xildhibaano & Senatoro ka kala tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre ayaan weli wax wara ka soo saarin mowqifkiisa kaga aadan tallaabada uu kalsoonida ugala noqday Golaha Shacaba, waxaana isha lagu hayaa jawaabta uu ka bixin doono.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya ayaa aqbalay kalsooni kala noqoshada Golaha Fulinta, waxaana uu War Saxaafadeed ku sheegay in Ra’iisal Wasaare kale uu soo magacaabi doono.
Tani ayaa dabka ku sii shidi karta xiisaddii siyaasadeed ee in dhawaalaba dalka ka taagneyd, kana dhalatay arrimaha doorahooyinka ee dalka.
Khayre ayaa noqonaya Ra’iisal Wasaarihii ugu mudada dheeraa ee dalka soo mara, ka dib xilligii burburka. Khayre ayaana sanadkii hore ka muddo dheeraaday Cali Maxamed Geedi, oo ahaa Ra’iisal Wasaarihii ugu mudada dheeraa.